China Garden qalab ubax rakiba ubax guriga Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Ruiyi
Haddii aad tahay geedo-yaqaan khibrad leh ama uun burooyinkeeda koraya, xirmadan sariirta beerta ayaa adiga kugu habboon.
Faaruqinta, shaabbinta, foorarsiga, foorarsiga, alxamida, sifaynta, ciida, ku buufinta, kormeerka, isku imaatinka, baakadaha, wax soo saarka dhammeeyey.
Ilaalinta dhirta iyo nafaqada: Hoos u dhaca aqalka dhirta lagu koriyo wuxuu kordhin karaa wax soo saarka dhirta iyadoo la siinayo jawi diiran oo nafaqo leh. Waxay kaloo ka hortagtaa saameynta cimilada daran, taasoo kuu oggolaaneysa inaad abuurto dhir aan caadi ahaan si wanaagsan ugu soo bixin aaggaaga. Waxaad dooran kartaa miraha iyo khudradda sanadka oo dhan xilliga qaboobaha.
Faaruqinta, shaabbinta, foorarsiga, foorarsiga, alxamida, nadiifinta, xoqida, ku buufinta, kormeerka, isku imaatinka, baakadaha, alaabada la dhammeeyay
Ilaalinta dhirta iyo nafaqada: Hoos u dhaca aqalka dhirta lagu koriyo ayaa kordhin kara wax soo saarka dhirta iyadoo la siinayo jawi diiran oo nafaqo leh. Waxay kaloo ka hortagtaa saameynta cimilada daran, taasoo kuu oggolaaneysa inaad abuurto dhir aan caadi ahaan si wanaagsan ugu soo bixin aaggaaga. Waxaad dooran kartaa miraha iyo khudradda sanadka oo dhan xilliga qaboobaha.
Ku habboon qof kasta oo jecel xiisaha beerta:Haddii aad tahay geedo-yaqaan khibrad leh ama uun burooyinkeeda koraya, xirmadan sariirta beerta ayaa adiga kugu habboon. Sanduuqa ubaxyada ubaxu wuxuu ka dhigayaa beeritaanka dhirta, khudradda iyo dhirta mid fudud oo aan walwal lahayn. U isticmaal aqalka dhirta lagu koriyo si aad ugu raaxaysato dayactir hooseeya, diirimaad iyo qoyaan, iyo cayayaanka iyo xayawaankuba.
Si fudud loo soo ururiyo:tayo sare leh, miridhku caddeyn yahay, budo lagu dahaadhay, sariirta jardiinada birta leh ee xarka leh xirmooyinka balaastigga ah ee isku-dhafka fudud. Daboolka aqalka dhirta lagu koriyo ee tayada sare leh ee PE ayaa sidoo kale si deg deg ah loogu dhejin karaa birta birta ah. Intaa waxaa dheer, waxaa jira geesaha badbaadada dusha sare iyo hoose. Daboolka aqalka dhirta lagu koriyo ayaa si fudud loogu keydin karaa bacda keydinta ee ku lifaaqan marka aan la isticmaalin.
Lacag dhig: Qiimaha sii kordhaya ee dhirta iyo wax soo saarka beeraha ayaa cunno caafimaad leh ka dhigaysa ikhtiyaar qaali ah. Laakiin tani daruuri maahan sidaas. Kobcinta cuntadaada uma fiicna kaliya jirkaaga iyo maskaxdaada, laakiin sidoo kale waxay u fiicantahay boorsadaada. Sannad kasta waxaad ka iibsan kartaa qaar ka mid ah miraha aad jeceshahay, khudaarta iyo geedaha, oo leh kharash aad u yar oo dhir ah!
Ilaalin Buuxda ：Aqalka dhirta lagu koriyo ee la qaadan karo waxaa loogu talagalay inuu ka ilaaliyo dhirtaada iyo abuurkaaga xaaladaha cimilada xun sida roobka, dabaysha, iyo barafka. Waxay u abuuri kartaa jawiga ugu wanaagsan ee dhirtaadu inay ugu koraan si caafimaad qab ah waxayna caawineysaa kordhinta xilliga koritaankaaga!
Waxyaabaha loo yaqaan 'Eco-Friendly PE': Waxaan u isticmaalnaa iskuxirnaan badan oo dabiici ah oo loo yaqaan 'Polyethylene (PE) .PE waa nooc ka mid ah cusbada jirka ka samaysan ee loo yaqaan "thermoplastic resin" oo laga sameeyay ethylene polymerized, taas oo ah mid aan ur lahayn, oo aan sun lahayn, waxayna leedahay iska caabin heerkulkeedu hooseeyo oo aad u wanaagsan, xasiloonida kiimikada wanaagsan, iyo aashitada wanaagsan iyo u adkeysiga daxalka .
Qaab dhismeedka adag:Aqalka dhirta lagu koriyo wuxuu qaataa biibiile bir ah oo tayo sare leh sidii taageero looga ilaaliyo xasiloonida iyo dhirta hoyga dabaysha. Sidoo kale, shabakad taageero culus ayaa adag oo kufilan inay qabato baakidh badan oo iniino ah, geedo dheriyo ah iyo walxaha kale ee fudud ee koritaanka dhirta.
Nooca Beerta Greenhouse
Magaca Summada QLYD
Qalabka Frame Bir
Dhammaystirka Frame Powder Dahaarka leh
Muuqaalka Easilt Aruuriyay, Eco Friendlt, Rodent Proof, Porta
Waxyaabaha Pol tolmo wanaagsan
Lambarka Moodalka OEM
Nooca Birta Bir
Cadaadiska La Daweeyay Dabeecadda
Magaca Beer la qaadan karo 3 * 6 * 2 2m Qasnadaha Polt-ka Tunnel
Cabir 300cm * 600cm * 220cm
Codsiga Dhirta iyo khudaarta soo baxda xilliyada oo dhan
Amarka Custom Aqbal
Gaarsiinta Waqtiga 30maalmood
Jidka gawaarida xeebta waxaa badanaa loo isticmaalaa gaadiidka gawaarida wadada ka baxsan iyo gawaarida xeebta. Adoo dhigaya jaranjarada gadaasha gaariga, gaariga xeebta wuxuu si sahal ah uga soo geli karaa gaariga gaadiidka wadada dhexdeeda, isagoo ka warqabaya gaadiid ku haboon oo deg deg ah iyo rar iyo dejin.
Oo dir an iimayl ku sales@ruiyitools.com
Tayada jawaab celinta iibsadaha waa mid wanaagsan, wax ku ool ah oo fudud, awood xamuul qaadasho, nolol adeeg dheer, isku xirnaan habboon
Asalka Asalka Shandong, Shiinaha
Hore: Gawaarida gawaarida xeebta
Xiga: Gawaarida xilliga firaaqada
Gawaarida Gawaarida Gawaarida, Shiinaha PU xumbo Wheel, PU Wheel, Shiinaha PU Wheel, Gawaarida Caster, Shiinaha Mashiinka la taaban karo,